ဆရာ့ကိုမေးချင်ပါတယ်။ ဆရာပြောလို့တော်တော်လေးလည်းသိခဲ့ပါပြီ။ NUG ပြောတဲ့ People's Defensive War ဆိုတဲ့ အကြာင်းကို ဆောင်းပါးအတိုလေး အဖြစ် ဝီကီမှာ ရေးကြည့်ချင်တယ်ဗျာ။ source ကိုတော့ သတင်းမီဒီယာတွေက ယူတာပေါ့။ ရေးသင့်မရေးသင့်ပြောပေးပါ၊ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၇:၃၈၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi
အင်္ဂလိပ်ဝီကီဘက်က en:Defensive war အကြောင်း ဘာသာပြန်ရေးသားနိုင်မှာပါ။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၈:၁၈၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
သူဆိုလိုချင်တာက en:Myanmar People Defensive War ကို ပြောတာနဲ့တူတယ်။ enwiki ဖက်မှာ redirect လုပ်ခံထားရပြီး အဲဒီပြန်ညွှန်းကို ဖျက်ဖို့ ဆွေးနွေးထားကြတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၃၇၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
(ဒီမှာ ကြုံတုန်းတစ်ခါတည်း ​ပြောချင်တာက) enwiki မှာ လာမရေးခင် ရေးသားနည်းလမ်းညွှန်​တွေကို အကြမ်းဖျင်းနားလည်အောင် အရင်ဖတ်ထားဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ WP:AT နဲ့ တခြားရေးသားနည်းလမ်းညွှန်တွေကို WP:MOS မှာ ကြည့်ပါ။ Myanmar People Defensive War ဆိုတာမျိုးက rough/ poor translation ပါပဲ။ [Myanmar] People's Defensive War ဖြစ်သင့်တာပါ။ Last but not least, drama king လုပ်လဲ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဝီကီမှာ guidelines and policies အရပဲ သွားတာပါ။ ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၁၅:၂၅၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
ကျေးဇူးပါ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၃၊ ၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၇၊ ၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi
အက်ထမိန်က ကျနော့်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ နောက်ထပ် လက်သရမ်းရင် ပိတ်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘာတွေ လက်သရမ်းခဲ့လဲ ဆိုတာရှင်းပြပါ။ ကျနော် ဘာကြောင့် ဒီလို အပြောခံ ထိတယ်ဆိုတာ သိရဖို့တော့လည်း ထိုက်တန်ပါတယ်။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၃၊ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi
@Neyya Swan Yi:မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဘာတွေ တည်းဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာသိမှာပါ။ ကျနော် ပြောခဲ့ပြီးသလိုပါပဲ။ အခုလောက်ဆိုရင် ဝီကီပီဒီးယားရဲ့ မူဝါဒလမ်းစဉ်‌ တွေကို နားလည်သဘာပါက်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၂:၁၀၊ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၂:၁၄၊ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi
WP:NOT ထဲက ဝီကီပီးဒီးယားသည် မင်းမဲ့စနစ် သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်သော ဟစ်တိုင် မဟုတ်ပါ လို့ ဖော်ပြချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ အဲလို ရေးချင်တယ်ဆိုရင် ဖေ့ဘွတ်လို လူမှုကွန်ယက်မှာ သွားရေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၂:၄၁၊ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၁၃:၄၁၊ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
ခင်ညွန့်မှာ ကျနော် ရေးထားတာကို ဘာလို့ ဖျက်သလဲ။ ပေါက်ကရတွေ ရေးတာမဟုတ်သလို ဆဲဆိုပြီးရေးတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ Neyya Swan Yi (ဆွေးနွေး) ၀၆:၄၂၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)Neyya Swan Yi
သူ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်ရဲ့ စာရေးသူနဲ့ စာအုပ်အမည်ကို ထည့်လို့ရပေမယ့် ဝီကီဆောင်းပါးထဲမှာ စာအုပ်ကိုဖတ်နိုင်တဲ့လင့်ခ်တွေဆီ ထည့်သွင်းညွှန်းဆိုတာမျိုးက spam/promotional အနေနဲ့ဖြစ်တာမို့ ဖယ်ရှားလိုက်တာပါ။ နောက် ကိုးကားထဲက ဖော်ပြထားသမျှကို တိုက်ရိုက်ကူးယူရေးသားတဲ့ ပုံစံ၊ သတင်းဖော်ပြချက်လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်အပိုင်းတွေလဲ ဖယ်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၁၈၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
မဂ်လာပါဗျ။ ကျနော် အကူအညီ ၂ခု တောင်းချင်ပါတယ်။ ၁။ ကျနော်ဘာသာပြန်လိုက်တစ်ချို့ကတော့ အဆင်ပြေပြေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ဒီဘက်ရောက်ရင် လင့်ခ်တွေက ပေါ်မလာတော့ဘူး။ ကိုးကားဆိုတဲ့ စာမျက်နှာမှ လင်ခ်တွေ မရှိဘဲ စာတွေပဲ ရှိနေတယ်။ အဲ့တာ ဘယ်လိုပြင်ရတယ်ပြောပေးနိုင်မလား။ ၂။ ကျနော် ဓာတ်ပုံ ဖိုင် မတင်တတ်ဘူးဗျ။ ဘရို အပန်းမကြီးဘူး ဆိုရင် တင်နည်း ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၀၃:၅၅၊ ၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)Editor in Myanmar
blocking? again? what did I do this time? I didn't do any vandilism this time. Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၀၉:၃၇၊ ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၀၉:၄၂၊ ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
GA review requestပြင်ဆင်
ဆရာ အချိန်ရရင် ကျနော် GA nominate လုပ်ထားတာလေး ကြည့်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ။ ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၃:၁၄၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
@Htanaungg: ကျနော် အချိန်သိပ်မအားဖြစ်နေလို့ဗျ။ ၀၈:၂၆၊ ၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Dr_Lotus_Black&oldid=733988" မှ ရယူရန်
၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။